Famerenana ny fandaharam-potoana: Fitaovana maimaim-poana amin'ny Python
Olona an-tapitrisany maro no mitady zavatra marobe amin'ny Internet isan'andro . Mikasa ny hanatratra vokatra manokana izy ireo, amin'ny fanangonana ny fampahalalana rehetra ilainy haingana araka izay azo atao, ka mahatonga ny raharaham-barotra hitombo. Vokatr'izany dia manangona tranokala izy ireo hanangona ny angona rehetra ilainy ary hameno azy ao amin'ny solosainy - cheapest linux vps. Ary iray amin'ireo fitaovana maoderina lehibe indrindra amin'ny tranonkala , izay afaka mamoaka ny angon-drakitra amin'ny mason'ny maso, dia Scrapy!
Scrapy dia mahatalanjona fitaovana fanangonana volavolan-tranonkala izay azo ampiasain'ny olona na orinasa izay afaka mahazo ny asa atao tsy amin'ny fotoana . Izany dia mamela ny mpampiasa hifantoka amin'ny fitrandrahana ny angona, amin'ny fampiasana ireo sela CSS. Scrapy dia rafitra Python izay manolotra ireo mpampiasa azy ireo ireo safidy fanampiny mba hamita ny asany ary hahazo ny angona tadiaviny nefa tsy mandany fotoana betsaka. Ankoatra izany, azonao atao ny manangona azy ireo amin'ny endrika sasany amin'ny ordinateranao.
Mila mitadidy ireo mpampiasa tranonkala fa ny Scrapy dia sehatra mahatalanjona izay manampy azy ireo hamoaka ny votoatiny rehetra, ary koa hivezivezy amin'ny pejy mifanaraka aminy.
Voalohany indrindra, mila mametraka Python amin'ny rafitra fiasanao ianao. Avy eo dia azonao atao ny maka azy io avy amin'ny tranonkala ofisialy.
Ny zavatra manaraka tokony hataonao dia ny mamorona tetikasa Scrapy aorian'ny fikaroka ny lahatahiry tianao hovidiana. Avy eo dia manangona ny angon-drakiny rehetra ary manangona azy any amin'ny toerana iray mba hahitana izany isaky ny maniry.
Ny fomba tsara indrindra hanangonanao rakitra miaraka amin'ny Scrapy dia ny fampiasana ny shell scrapy. Afaka mampiasa ny Xpaths ianao mba hisafidianana singa samihafa amin'ny tahirin-kevitra HTML. Amin'ny ankapobeny, ny Spider Scrapy dia tompon'andraikitra amin'ny famaritana ny fomba andoavanao ny rohy manokana amin'ny alalan'ny crawling amin'ny alalan'ny tranonkala iray. Ankoatra izany dia azonao atao ny mamoaka ireo fampahalalana rehetra ilaina avy amin'ireo pejiny ho an'ny rafitra hafa an'ny Python.
Amin'ny fampiasana programa fitsangatsanganana, azonao atao ny maka izay votoinao tianao. Ilainao fotsiny ny manoratra maromaro ho an'ny tranonkala samihafa. Ankoatra izany, mila manoratra code ianao mba hamadika ny angon-drakitra voarakitra ho toy ny format tsara ary manangona izany amin'ny solosainao.